यी २ माग पूरा गरिदिए ओलीले एमसीसी पास गर्न देउवालाई पूराका पूरा सहयोग गर्ने ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
यी २ माग पूरा गरिदिए ओलीले एमसीसी पास गर्न देउवालाई पूराका पूरा सहयोग गर्ने ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ओली अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गराउन तयार भएका छ । उनले पास गराउनका लागि राजनीतिक बार्गेनिङ सुरु गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले एमसीसीको मुद्धाले सरकारी गठबन्धनमा असमझदारी बढेपछि राजनीतिक बार्गेनिङ सुरु गरेका हुन ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओबादी र नेकपा एकीकृत समाजबादी पार्टी एमसीसीकै कारण अकर्मण्यतामा पुगेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको बार्गेनिङ पावर ह्वात्तै बढेको छ । गठबन्धनका शीर्षस्थ नेता प्रचण्ड र माधब नेपाल यस मुद्धामा अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।
यसले सत्ताको नेत्तृत्व सम्हालेको नेपाली काँगे्रस र त्यसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकै अप्ठ्यारो महसुस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको यो अबस्थालाई हेरेर राजनीतिका चाणक्यजस्ता एमाले अध्यक्ष ओलीले सौदाबाजी सुरु गरेका हुन ।
अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पास गराउने हो भने अहिले तत्काल दुई ओटा शर्त पुरा गर्नुपर्ने ओलीको प्रस्ताब रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार पहिलो शर्तमा १ नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशको सरकार कायम राख्नुपर्ने र दोस्रो शर्त माधब नेपालको नेत्तृत्वमा बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजबादी खारेजीमा सहयोग पु¥याउनु पर्ने छ ।
यि दुबै शर्तलाई प्रस्ताबको रुपमा ओलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइसकेका छन् । यो प्रस्ताबप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीररुपले बिचार गरिरहेको बताइएको छ । ‘अहिले देउवा र ओलीले एक–अर्कालाई हेरिरहेका छन् । देउवाले चाहदा ओलीका दुबै प्रस्ताब पुरा हुन सक्छन भने ओलीले चाहदा एमसीसी पनि सजिलै पारित हुन सक्छ ।’
देउवासमक्ष ओलीको यस्तो प्रस्ताब पुगेपछि एमसीसी प्रतिनिधिलाई पहिले ओलीसँग भेट गराउने तारतम्यता प्रधानमन्त्री देउवाले नै मिलाएको स्रोतको दाबी छ । ओलीको प्रस्ताबले एमसीसीका बारेमा एमाले र उनी सकारात्मक नै रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाई छ ।
राजनीतिक सौदाबाजीलाई देउवाले सामान्य नै लिएका छन् । ‘देशको पहिलो राजनीतिक शक्तिले राजनीतिमा यस्तो गर्नुलाई देउवाले सकारात्मकरुपबाट हेर्नु भएको छ ।’ देउवानिकट नेता भन्छन् ‘कही न कही ओली र एमालेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा उहाँ पुग्नु हुदैछ ।
’ तर पहिले दबाब सिर्जना गरेरै एमालेलाई पनि एमसीसीको पक्षमा ल्याउने देउवाको रणनीति छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले बिदेशी कुटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न एमसीसी प्रतिनिधिलाई पहिले ओली निबासमा भेट गराउने योजना बनाएका हुन । उता ओली पनि देउवालाई ब्यापक दबाब दिएर एमालेसँग सम्झौता गराउन बाध्य पार्ने रणनीतिमा छन् ।
यसका लागि संसद चल्न नदिने, एमसीसीलाई अप्ठ्यारो पार्ने र बिभिन्न बहानामा सडक प्रदर्शन गराएर देउवालाई सम्झौताका लागि तयार पार्ने उनको नीति देखिन्छ । यस्तो बेला सत्तागठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड र माधब नेपालको अकर्मन्यता ओलीका लागि ठूलो अबसर बन्न सक्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गराउने कार्यलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठाको बिषय बनाएकाले उनी पनि ओलीसँग छलफलको मनस्थितिमा पुगेका छन् । ओलीले चाहेमा दुई तिहाईभन्दा बढी मतले एमसीसी पास हुने र यसको अपजस काँगे्रसले मात्र लिनु नपर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री देउवाको नजर ओलीतिर जान थालेको छ । ‘सत्ता साझेदारमा रहेका नेताहरु प्रचण्ड र माधब नेपालप्रति यही मुद्धाले प्रधानमन्त्रीको दुरी बढ्न सक्ने देखियो ।’
काँग्रेस नेता डा। नारायण खड्काले भने ‘यसले स्वभाबिकरुपमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग सरकारले नयाँ शिराबाट सम्बन्ध बिस्तारको माग गरेको छ ।’ नेता खड्काले एमसीसीबारे काल्पनिक आशंकामा प्रचण्ड र माधब नेपाल हिडेको समेत आरोप लगाए ।
‘सरकार र एमसीसीले धेरै अस्पष्टतालाई हटाएको छ । यो परियोजना नेपालको संबिधान, कानुन मातहात नै सन्चालन हुने प्रष्ट पारिसक्दा पनि सत्ता गठबन्धन दलबाट थप अड्को थाप्न हुदैन ।’ उनी भन्छन् । नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ‘गेम चेन्जर’ को भूमिका खेल्न सक्ने परियोजनाप्रति नकारात्मक बन्दा त्यसले मुलुकको बिकास र हितमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन परिणामलाई दृष्टिगत गरेर सत्ता गठबन्धन अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
एमसीसीले काँगे्रस, नेकपा माओबादी र नेकपा समाजबादी दलका नेताबिच दुरी बढ्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष ओली यसलाई अबसरमा परिणत गर्न कम्मर कसेर लाग्न थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीकै कारण गठबन्धनबिच तिक्तता आउने बुझेरै देउवा सरकार गठन भएको केही दिनमै सदनमा बोल्दै एमसीसीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीको चाहना तत्कालै एमसीसी संसदमा टेबल होस भन्ने थियो । उनको यो चाहना सरकारले सम्बोधन पनि गरिदियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद बिस्तारलाई भन्दा एमसीसी पास गर्नलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । प्रधानमन्त्री देउवा यही एमसीसी पास गरेर अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिहरुको बिस्वासिलो पात्र बन्न चाहिरहेको देखिन्छ । पश्चिमा शक्तिको साथ र समर्थन रहेसम्म सत्ता संकट नहुने उनको बुझाई देखिन्छ ।
‘एमसीसी पारित गराएर प्रमुख बिदेशी दात्तृराष्ट्र राष्ट्रहरुको मन जित्न सकिएमा बैदेशिक लगानी ह्वात्तै बढाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास देखिन्छ ।’ अर्थराजनीतिक बिश्लेषक प्रकाश दुलाल भन्छन् ‘बास्तबमा यो बुझाई सही पनि हो । अनुदानमा दिएको रकम तथ्यहीन र कपोलकल्पित आक्षेप लगाउँदै अस्वीकार गर्ने, अनि हाम्रो बिकासका लागि पैसा देऊ भन्दा कसैले विश्वास गर्दैन ।’
एमसीसीका बारेमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु र तिनका नेताहरुले गरेको अनर्गल प्रचारले उनीहरु कतिसम्म झुट र बेइमानी रहेछन् भन्ने देखाएको उनको भनाई छ । ‘अहिलेसम्म संसारका ५० ओटा देशहरुले एमसीसी अनुदानको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यिमध्ये ४२ ओटा देशहरुले त योजना नै सम्पन्न गरिसकेका छन् ।’ उनी भन्छन् ‘ती कुनै पनि मुलुकमा न अमेरिका सेना बसेको छ, न उपनिबेश कायम गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरु तथ्यमा नभएर कसैको इशारामा यस्तो प्रोपोगाण्डा मच्चाइरहेका छन् ।’